Yakachipa Disc Fertilizer Chisanganiso Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Disc Fertilizer Mixer Machine?
Iyo Disc Fertilizer chisanganiso Machine inosanganisa iyo mbishi zvinhu, ine inosanganisa disc, ruoko rwunosanganisa, furemu, pabhokisi regear uye nzira yekufambisa. Hunhu hwayo ndewekuti pane humbwe hwakarongedzwa pakati peiyo inosanganisa diski, chivharo chesilinda chakarongedzwa padhiramu, uye ruoko rwekusanganisa rwakanyatso kubatana necylinder chivharo. Mumwe mugumo unokamisa mugodhi unobatanidza kune humburumbira chifukidziro unopfuura nepasirinda, uye iyo inomutsa shaft inotyairwa. Iyo yakavharidzirwa humburumbira inotenderera, nokudaro ichirovera ruoko runosimudza kutenderera, uye nzira yekufambisa inotyaira iyo inomutsa shaft kubva kune ina-nhanho yekufambisa nzira.
Wokunze mutongi inch
Chii chinonzi Disc Fertilizer Mixer Machine inoshandiswa?
Disc / Pan Fertilizer Chisanganiso Machine inowanzoshandiswa kugadzira misanganiswa yefetiraiza mbishi zvinhu. Musanganisi anomutsa zvakaenzana nekutenderera uye izvo zvinhu zvakasanganiswa zvichaendeswa zvakananga kubva kune inoendesa michina kuenda kune inotevera yekugadzira maitiro.
Kushanda kweDisc Fertilizer Chisanganiso Machine
Iyo Disc Fertilizer chisanganiso Machine inogona kusanganisa zvese zvakasvibirira mumusanganisi kuti uwane zvakaenzana uye zvakanyatso sanganisa zvinhu. Inogona zvakare kushandiswa sekusanganisa uye yekudyisa michina mune yese fotereza yekugadzira mutsara.
Zvakanakira Disc Fertilizer Chisanganiso Machine
Iyo huru Disc Fertilizer chisanganiso Machine muviri wakarongedzwa nepolypropylene bhodhi kana simbi isina chinhu, saka hazvisi nyore kunamira uye kupfeka kusagadzikana. Iyo cycloid tsono vhiri rinodzora ine hunhu hwecompact dhizaini, nyore mashandiro, yunifomu inomutsa, uye zviri nyore kubuda.
(1) hupenyu hwakareba hwebasa, kuchengetedza simba uye kuchengetedza simba.
(2) Diki saizi uye inokurumidza inomutsa mhanyisa.
(3) Inoenderera ichiyerera kuti isangane inoenderera yekugadzira zvinodiwa zveyese yekugadzira mutsara.
Dhisiki Fertilizer Chisanganiso Vhidhiyo Ratidza
Dhisiki Fertilizer Chisanganiso Model Sarudzo
Pashure: Horizontal Fertilizer Chisanganiso
Zvadaro: BB Fertilizer Musanganiswa
Nhanganyaya Chii chinonzi Horizontal Fermentation Tank? Kupisa Kwekudziya Waste & Mufudze Kuvira Tangi kunonyanya kuita yakanyanya-tembiricha eerobic yekuvirisa yezvipfuyo nehuku yehuku, tsvina yekicheni, sludge uye imwe tsvina nekushandisa chiitiko chehutachiona kuti uwane hutachiona sludge kurapwa kunoenderana ...